Kulan looga xaajooneyo falalka dembiyada ee gawaarida xamuulka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kulan looga xaajooneyo falalka dembiyada ee gawaarida xamuulka
La daabacay måndag 10 april 2017 kl 12.29
In la helo hab looga hor-tegi karo
Anna Johansson (S), wasiirka kaabiyeyaasha dhaqaale. sawir: Thomas Johansson/TT
Wasiirka kaabiyeyaasha dhaqaale Anna Johansson (S) ayaa inta toddobaadkan lagu guda jiro isugu yeertay shirkadaha gawaarida sancadeeya iyo mulkiileyaasha gawaarida xamuulka sidii looga wada xaajoon lahaa habka looga hor-tegi karo af-duubka gawaarida xamuulka.
– Waxay noqon kartaa hab teknolooji ah. Tusaale ahaan inaan la kicin karin gaari xamuul ah haddii aannu ahayn darawalkii dhabta ahaa, fariin awtamaatik ah, qufullo lagu xiro iiwm. Waxay sidoo kale noqon kartaa habab kale ee looga hor-tago, sida ay sheegtay wasiiraddu.
Marka laga yimaado in loo helo xal tekneloojiyo ah waxaa sidoo kale laga wada xaajoon doonaa in la helo isbaarooyin la dhigo goobo ka mid ah faras-magaalaha, sida ay sheegtay Anna Johansson (S).
– Waa in dhabbooyinkeennu noqdaan kuwo ammaan ah, waxaana loo baahan yahay sidii loo heli lahaa hab isbaarooyin ah ee looga hor-tago ammaan-darrada weerrarada noocaasi ah oo kale. Waana sababta dhalisay in kulankaa lagu casumi sidoo kale degmooyinka.
Dood ayaa middaa laga yeeshay waddammada EU wixii ka dambeeyay dhacdooyinkii noocooda ahaa ee ka dhacay magaalooyinka Baarliin iyo Nice. Hase yeeshee waa mid u baahan dheeli-tir. Xad ayaa jira xadidaya habka wax looga qaban karo, sida ay sheegtay.
– Ma dooneyno in aannu ku tallaabsano howlo naga fogeeynaya habkii aannu difaaceeyney, waxaan ula jeedaa habka bulshada furfuran. Sidaa daraadeed waxaa loo baahan yahay dheeli-tir in lagu sameeyo howlaha la dooneyo in la qabto.
måndag 10 april 2017 kl 11.28
måndag 10 april 2017 kl 14.45
måndag 10 april 2017 kl 10.38
Shaqaalaha Raadiyaha Iswiidhan isniinta ayey soo laabanayaan
lördag 8 april 2017 kl 14.52
lördag 8 april 2017 kl 14.37
lördag 8 april 2017 kl 13.30
lördag 8 april 2017 kl 11.43
lördag 8 april 2017 kl 11.11
lördag 8 april 2017 kl 08.16
fredag 7 april 2017 kl 22.30
fredag 7 april 2017 kl 22.58
fredag 7 april 2017 kl 20.17